2005 ဟွန်ဒါ Silverwing သတ်မှတ်ချက်များ eHow | သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူမော်တော်ဆိုင်ကယ် catalog, ရုပ်ပုံများ, ratings, ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများနှင့် discusssions
Home → Honda → 2005 ဟွန်ဒါ Silverwing သတ်မှတ်ချက်များ eHow
20 Jun 2015 | Author: dima | Comments Off on 2005 ဟွန်ဒါ Silverwing သတ်မှတ်ချက်များ eHow
အဆိုပါ 2005 Honda Silver Wing isatwo-passenger touring scooter that comes in two trims, အဆိုပါငွေ Wing အခြေစိုက်စခန်းမော်ဒယ်နှင့် Silver, Wing ကို ABS. ယင်းကို ABS မော်ဒယ်အနက်ရောင် / ငွေနှင့်တိုက်တေနီယမ် / ငွေအ duotone အရောင်ရရှိနိုင်နေစဉ်အခြေစိုက်စခန်းမော်ဒယ်အနက်ရောင်နှင့်တိုက်တေနီယမ်အရောင်ရရှိနိုင်. အဆိုပါကိရိယာ panel ကခရီးစဉ် odometer တူသောအခြေခံအင်္ဂါရပ်များကိုကမ်းလှမ်း, လောင်စာဆီအဆင့်ကိုသတိပေးကာနာရီ.
နှစ်ခုမော်ဒယ်များအကြားတစ်ခုတည်းသောအဓိကကွာခြားချက်ကို ABS မော်ဒယ်စံအဖြစ် antilock ဘရိတ်စနစ်ကကမ်းလှမ်းကြောင်း.
Both models are equipped witha50-horsepower, 582-အတူ cc အရည်-အအေးလေးလေဖြတ်အပြိုင်-အမွှာအင်ဂျင်ကို 37 lb. -ပေ. မှာ torque ၏ 6,000 rpm ပါ. The engine’s bore and stroke is 72.0 mm and 71.5 mm respectively, and it hasacompression ratio of 10.2-to-1. The Silver Wing’s transmission is an automatic V-matic belt drive and the bike has an electric ignition.
Fuel capacity is 4.2 gallons witha0.9-gallon reserve. အဆိုပါ 2005 model also meets the CARB 2004 emission standards.
2005 Honda Rincon Specifications. အဆိုပါ 2005 Honda Rincon is one of the company’s all-terrain vehicles. Introduced into the market in 2003, according.
Features of the Honda Gold Wing. အဆိုပါ 2010 line of Honda Gold Wing touring motorcycles marks the 35th year of production for.
အဆိုပါ Honda Silver Wing isahigh-powered scooter that comes with an automatic transmission, room for two riders,afuel-injection system, underseat.
Both Honda and Suzuki are well known scooter manufacturers. Both offer scooters that start at 50cc and go up from there. အဆိုပါ.
The Aero frame and wheels are made of steel. The bike’s front suspension used forks of 1.6 inch diameter with 4.6 လက်မ.
တစ်ဦးက Honda Silver Wing isa600 cc motor scooter. Like most motorcycles and motor scooters, အဆိုပါ 2007 Silver Wing does not.
ဟွန်ဒါ CBR 125 Review Best Beginner Motorcycles
19.06.2015 | Comments Off on ဟွန်ဒါ CBR 150R 2012 စက်ဘီးပထမဦးစွာစီးနင်စက်ဘီး 135cc-165cc Autocar အိန္ဒိယ
သင်္ဘော MV Agusta 1100 Grand Prix Brammo Enertia စက်ဘီး Kawasaki ရင်ပြင်လေး ဆူဇူကီး Colleda CO KTM 125 ပြိုင်ပွဲ Concept ကို ဟွန်ဒါ DN-01 အလိုအလျောက်အားကစား Cruiser Concept ကို Ducati Desmosedici GP11 ဆူဇူကီး B ကိုဘုရင်က Concept ကို မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအိပ်မက်ကလေးများ Dokitto စမတ် eScooter Moto Guzzi 1000 Daytona Injection Bajaj Discover Harley-Davidson XR 1200 ခံယူချက် တော်ဝင် Enfield Bullet 500 ဂန္ထဝင် Ducati Diavel ဟွန်ဒါ Goldwing ရှေ့ပြေးပုံစံ M1 တစ်ဦးဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအတွက် ဟွန်ဒါ DN-01 ဟွန်ဒါ X4 အနိမျ့ Down Aprilia Mana 850 အိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Classic စက်ဘီး Kawasaki ER-6n ဆူဇူကီး AN 650 ဆူဇူကီး B-ဘုရင်ကနောက်ဆုံး prototype Ducati 60